XZ450Plus အလျားလိုက်ညှနျကွားသောတူးစင်သည်အမြင့်ဆုံး reaming အချင်း 1000mm, အများဆုံး push-pull အင်အား 960kN၊ torque 23500N · m နှင့်ရှင်းလင်းသောစက်အလေးချိန် 20t ရှိသည်။
XZ450Plus HDD rig သည်ပေါင်းစည်းထားသော self-loaded ဖြစ်ပြီး၊ ပိတ်ထားသောကွင်းများနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ load sensing control system ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်စနစ်နှင့်ဂီယာစနစ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာအဆင့်မြင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားသည်။
XZ450Plus HDD ၏နိဒါန်း Features
၁။ တံခါးပိတ်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ အထိခိုက်မခံသောထိန်းချုပ်မှု၊ လျှပ်စစ် - ဟိုက်ဒရောလစ်အချိုးကျထိန်းချုပ်မှုနှင့်အခြားအဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာများ၊
ပါဝါခေါင်း၏လည်ပတ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန် 2. ဂီယာထိန်ချော - ဆွဲပါ။ floating power head သည် drill pipe thread ကိုများစွာကာကွယ်နိုင်ပြီး drill pipe ၏သက်တမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
၄။ သုံးစွဲသူများ၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ပါဝါတိုးမြှင့်သောခေါင်းကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်နှစ်ဆသောဆွဲအားကိုရွေးချယ်ခြင်း၊
(၅) console သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပိုမိုအဆင်ပြေသော ergonomics ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
6. လမ်းလျှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန် 6. လိုင်းထိန်းချုပ်မှု။
7. စက်ကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (အပြည့်အဝအလိုအလျောက်မဟုတ်) တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။
194/2200kW / r / min
တွန်းကန်အား - ဆွဲ
Pinion နှင့်ထိန်သိမ်း drive ကို
တွန်းကန်အား - ဆွဲအားအမြင့်ဆုံး （kN）
တွန်းကန်အား - ဆွဲမြန်နှုန်း （m / min min
လေးမော်တာ drive ကို
ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း （r / min）
အများဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်း （L / min）
မက်စ် backreamer အချင်း
6CTA8.3-C260အင်ဂျင်တရုတ် II
QSB6.7-C260 အင်ဂျင်နီယာတရုတ်Ⅲ၊ အီးယူအဆင့် IIIA
2 တန်ချိန် Loader ကိုချီစက်
3 တန်ချိန် Loader ကိုချီစက်
ရွှံ့စနစ် ရွှံ့စုပ်စက် 600L / min
450L / min ရွှံ့စုပ်စက်
ရေနံချောင်း Semi-automatic pipeloader
အလိုအလျောက် pipeloader (လိုအပ်သော 3t လိုအပ်သည့် Loader Crane လိုအပ်သည်။ )
လိုင်းထိန်းချုပ်ရေး Walking ဝါယာကြိုး -controlled လမ်းလျှောက်
XZ450 တပ်ဖွဲ့များXZ450Plus အများဆုံးဆွဲအား Max.Pulling Force ကို kn 960
အင်ဂျင် Dongfeng Cummins
လှည့်, တွန်းကန်အား / Pump Pull ဒန်ဖော့
အရန် pump Permco
တွန်းကန်အား / Valve ဆွဲပါ ဒန်ဖော့
ရထားလှည့်မော်တာ Liyuan / Huade
မော်တာသယ်ဆောင် / ဆွဲပါ Liyuan / Huade
Carriage Speed ​​Reducer Bonfiglioli / Brevini / XCMG
ဟိုက်ဒရောလစ် Tube XCMG
Motor / Speed ​​Reducer လမ်းလျှောက်ခြင်း Eaton
ထုပ်ပိုးခြင်းစာရင်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများပါ ၀ င်သည့် XZ450Plus HDD နှင့်ထောက်ပံ့ထားသည်။
ကုန်ပစ္စည်းလက်မှတ် / ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ / အင်ဂျင်၏လည်ပတ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းလက်စွဲ / အင်ဂျင်၏အရည်အသွေးအာမခံချက်လက်စွဲ / Loader Crane / Mud Pump လမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်၏လည်ပတ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုလက်စွဲ
ထုပ်ပိုးခြင်းစာရင်း (၀ တ်ဆင်ထားသည့်အပိုပစ္စည်းများစာရင်း၊ မော်တော်ယာဉ်သုံးပစ္စည်းများစာရင်း၊ ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းစာရင်း)
ရှေ့သို့ XZ420E အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
နောက်တစ်ခု: XZ680A အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
XZ2200 အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
XZ1000A အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
XZ680A အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
XZ320D အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
hdd တူးစင်, hdd တူးဖော်ခြင်းစက်, ကျင်းပေါက်တူးစက်, အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်,